Madaxweyha jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya oo ku wajahan Dhuusamareeb – Radio Muqdisho
Madaxweyha jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya oo ku wajahan Dhuusamareeb
Wafdi uu hoggaaminayo Madaxweynaha Jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya mudane Xasan sheekh Maxamuud ayaa ku wajahan magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud.
Qaban qaabada Soo dhaweynta wafdiga ayaa waxa ay ka socotaa magaalada Dhuusamareeb waxaana heegan buuxa kujira Ciidamada amniga, dhinaca kale soo dhaweynta Madaxweynaha waxaa ka qayb qaadanaya Odayaasha Dhaqanka iyo dadka kunool magalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud.
Xubno kayimid Afarta xaafadood ee magaalada ayaa sidookle isku diyaarinaya Soo dhaweynta wafdiga madaxweynaha dalka mudane Xasan sheekh Maxamuud.
Wixii ku soo kordha wararka la xiriira soo dhaweynta Madaxweynaha iyo wafdigiisa waxaan idinku soo gudbin doonnaa wararka kale Insha allah.
Roobabkii Gu’ga oo ka Curtay Deegaanno ka mid ah gobolada dalka iyo Barakacayaal sheeganaya nolol xumi
Shariif Xasn Sheekh Aadan” Waxaan isku diyaarinay la dagaalanka kooxda UGUS”